Ny tsindrona mivantana namboarina sy ny vokatra famokarana menaka miverimberina ho an'ny mpanjifa misy karazana manokana dia 400mm-1600mm. Ny tsipika famokarana valiny dia azo ampiasaina tsy natao ho an'ny famokarana lamba mihetsiketsika ihany, fa ho an'ny famokarana fitaovana fanivanana ranon-javatra sy fitaovana fanivanan'ny rivotra. Ny fitaovam-panasiana ny tsiranoka dia matetika ampiasaina amin'ny sehatry ny fikarakarana ny rano, ny indostrian'ny solika ary ny simika simika, miaraka amina firafitra mitovy, ny filamatsy filtrana avo, ny vokatra miharihary, ary ny fahalotoana mahery vaika mitazona ny fahafaha-manao sy ny asa fanompoana lava. Ireo fitaovam-panamoriana an'habakabaka dia ampiasaina amin'ny rafitra fanadiovana ny rivotra, ao anatin'izany fa tsy voafetra amin'ny fanadiovana rivotra anatiny, famolavolana ny fametrahana ny rivotra, ary sns dia misy tombony avo lenta sy fahaiza-manao vovoka avo.
Io milina io dia tsy vitan'ny hoe mamoaka ny famoriam-bokatra alikaola, fa koa tsy manenjana azy izay tena matevina. Amin'ny alàlan'ny fanovana ny lavidavitra miverimberina sy hafainganana ihany koa, ny hafainganam-pandeha, ny tsipika famokarana famerenana mety hahatonga ny tsy misy tenona ho matevina. Avy eo, io fitaovana io dia azo ampiasaina hanaovana lamba mafana, hanamboarana ny kofehy sy zavatra hafa mba ahafahana manafana ny olona.
Mahagaga, andro vitsivitsy izay, ny injeniera ao amin'ny orinasa dia mikasa ny hahatonga ny rano hanaiky ny diaper zazakely. Ary nahazo ny fahombiazana mahafinaritra ry zareo. Ny famokarana vita amin'ny famokarana valin-dresaka famoronana dia afaka manisy rano mora ny rano. Ka ny fampandehanan-tsika famokarana famaliana miovaova dia miovaova. Amin'ny andro ho avy, ny vondrona teknikan'ny orinasa dia hamolavola fiasa bebe kokoa amin'ny tsipika famokarana valiny.
Ankoatra ny andalana famokarana lamba vita amin'ny menaka, ny milina saron-tava dia famokarana orinasa ihany koa. Araka ny fangatahan'ny mpanjifa, ny orinasa dia afaka manome karazana milina fanaovana masonkalo samihafa.